Wararka Maanta: Axad, Oct 10, 2021-Raysal wasaare Rooble: Waxaa iga go'an in aan marnaba gorgortan ka gali doonin caddaalad u helida Ikraan Tahliil iyo qoyskeeda
Raysal wasaare Rooble ayaa carrabka ku adkeeyay in arintaas ay maxkamad hortaallo isla markaana maalin maalmaha ka mid ah gacanta lagu dhigi doono dambiilayaashii ka dambeeyay kiiska Ikraan Tahliil.
Raysal wasaaraha waxa uu qoyska Ikran Tahliil ka dhegaystay caqabado ay sheegeen in ay ku hor gudban yihiin Xeer-Ilaalinta Maxkmadda Ciidamada, si ay u dhaqaajiyaan kiiska Ikraan ayna u helaan baaris madax bannaan.
Kulanka uu raysal wasaaruhu la qaatay qoyska Ikraan Tahliil, wuxuu kusoo aadayaa xilli illaa iyo haatan madaxda sare ay isku khilaafsan yihiin habka loo marayo baaritaanka kiiska Ikraan oo ahayd sarkaal katirsan NISA.
Ikraan, waxaa la waayay taariikhdu markay ahayd 26kii june ee sannadkan, kadib markii abbaare siddeedii fiidnimo ay meel ku dhow gurigeeda ka raacday gaari nuuca raaxada oo u yimid.
Labadii bishii hore, hay’adda NISA waxay shaacisay in Ikraan Tahliil ay gacanta u gashay Alshabab, kadibna ay dileen. Balse Alshabaab ayaa maalmo kadib iska fogeeyay in ay wax lug ah ku leeyihiin kiiska Ikraan.